नारियल तेल - iSearch
सुरु Superfoods तेल नरिवल तेल
1 नारियल तेल - सम्पूर्ण शरीरको लागि एक उपचार
2 उत्पादनको प्रभाव
2.1 छालामा प्रभाव
2.2 आन्तरिक अनुप्रयोग
3 कुन फारममा उत्पादन गर्न सकिन्छ?
4 तपाईं उच्च गुणस्तरको उत्पादनलाई कसरी चिन्नुहुन्छ?
5 उच्च गुणस्तरका निर्माताहरूको प्रस्ताव
6 सर्वश्रेष्ठ उत्पादन र भिडियोमा उनीहरूको अनुप्रयोग
7 नवीनतम अनुसन्धान
8 इन्टरनेटमा लाभकारी खरीद
नारियल तेल - सम्पूर्ण शरीरको लागि एक उपचार
नरिवल तेल आन्तरिक र बाह्य अनुप्रयोगको लागि साताका लागि प्रयोग गरिएको छ। यसको बहुमूल्य सामग्रीको कारण, तेलले कम गर्न सक्छ वा धेरै रोगहरु लाई पनि कम गर्न सक्छ। विज्ञान अझै असाधारण प्राकृतिक उपचारको बहुविध मोडहरू खोज्दै व्यस्त छ।
मूल्यवान सामग्रीको कारण नरिवलको तेल धेरै फरक प्रयोगहरू छन्। यसमा अमीनो एसिड, भिटामिन, खनिज, एन्टीएक्सिडेंट र लौरिक एसिड हुन्छ। यी सक्रिय सामग्री मध्ये प्रत्येक शरीर मा निश्चित प्रभाव पूरा गर्दछ र यसैले एक व्यापक स्पेक्ट्रम को सक्षम गर्दछ। तेल छालामा बाह्य प्रयोगको लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ वा पनि लिइन्छ।
नारियल तेल विभिन्न छाला समस्याहरूको उपचारको लागि ठूलो छ। तेल एक विरोधी भ्रामक प्रभाव छ र यसैले यस तथ्य मा योगदान दिन सक्छ कि सानो सूजन foci मुँहासे मा छिटो निस्कन्छ तर पनि atopic dermatitis। लौरिक एसिड, तेलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सक्रिय सामग्री मध्ये कुनै पनि ब्याक्टेरिया, रोगाणु र भाइरसलाई मार्न सक्षम छ। यस तरिकामा, सुगन्ध छिट्टै राहत हुन सक्छ। तेल राम्रो छ, त्यसैले यो अवांछित दुष्प्रभाव को बिना, छाला को संवेदनशील क्षेत्रहरुमा पनि लागू गर्न सकिन्छ।
उत्पादनले स्वस्थ छालाको हेरविचारलाई पनि मद्दत गर्दछ र अनुहार हेरविचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तेलले छालालाई झुर्रा र अन्य परिवर्तनहरूबाट बचाउन सक्छ। यसको उच्च गुणस्तरको सामग्रीको साथ, यो सधैं चिसो नरम संग छाला प्रदान गर्न सक्षम छ। साथै, यो सुरक्षा तह एक प्रकारको यस्तो सुक्खा गर्म हावा, निकास ग्याँसहरु, सर्द र यूवी विकिरण धेरै पर्यावरण प्रभाव देखि संवेदनशील छाला द्वारा संरक्षित हुन सक्छ खेल्छ। यस तरिकामा तपाईं जवान उपस्थिति लामो समय सम्म राख्न सक्नुहुन्छ।
खुसी हुनेछ नरिवल तेल लिप हेरचाहको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ र कुनै पनि होंठ बाम भन्दा अधिक पनी देखिन्छ। तेल ओठमा लागू गर्न सकिन्छ र होंठ छालाको प्राकृतिक संरचनालाई समर्थन गर्दछ। ओठहरू सुत्न सक्दैनन् र सानो दरारहरू, जुन सुकेको कारण हुन सक्छ, छिट्टै निको पार्छ। तेल र हेरपस छालाका जीवाणुरोधी प्रभावको कारण चाँडै निको पार्न सकिन्छ। चूंकि यो लिप हेरचाह बिना रासायनिक additives को काम गर्दछ, यो अक्सर प्रयोग गर्न सकिन्छ, होंठ छाला हानिकारक बिना।
खुट्टा र कपाल पनि नरिवलको तेलबाट लाभ उठाउन सक्छ। धेरै मानिस जो डन्ड्रफ, कपालको क्षति वा भित्ता र बिरुवाको कपालबाट पीडित हुन्छन् भनेर थाहा पाउँछ कि कस्मेटिक उत्पादनहरूले प्रायः यी समस्याहरूको समाधान गर्न कम गर्छ। नरिवल तेल सजिलै खोप मा मार्न सकिन्छ र एक छोटो कार्य पछि फलाम गर्न सक्छ। त्यसोभए तपाईंले कपालको नमीलाई लुकाउनु हुन्छ र तेलमा निहित भिटामिन नयाँ चमक प्रदान गर्दछ। हाराबोडनमा यस्तो आहारले धेरै अवस्थामा, कडा हानिमा ढिलो हुन सक्छ।
एक अन्य कस्मेटिक आवेदन प्राकृतिक दुर्गन्धको रूपमा नारियल तेल हो। उत्पादनको फ्रेमको नाजुक छाला पोषण गर्दछ र गंधको बोसेरियालाई नष्ट पारिएको छ। यसले रासायनिक रूपले उत्पादन गरिएको दुर्गन्धमा सहज बिना बगैचा गंधलाई रोक्छ, जुन प्रायः क्यान्सरसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
साथै, को खपत नरिवल तेल धेरै रोगहरूको लागि संकेत गरिएको छ। शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन को लागि लरिस एसिड एकदम सही छ। यो ब्याक्टेरिया र भाइरस को सेल झिल्ली तोड्न र तिनीहरूलाई मार्न सक्षम छ। शरीरले मात्र पर्याप्त मात्रामा लोरिक एसिडहरू उत्पादन गर्न सक्दैन, र नरिवल तेल यो महत्वपूर्ण सक्रिय अवयवको लागि आदर्श स्रोत हो। यसको एन्टीब्याक्टेरियल र एंटीवायरल गुणहरूले पनि हर्प फैलाउन सक्दछ।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरू साबित भएका छन् कि नरिवलको तेलले गम्भीर बीमारीहरूमा प्रभावकारी हुन सक्छ। यसमा समावेश छ, उदाहरणका लागि, अल्जाइमरको। अल्जाइमरको रोगको महत्त्वपूर्ण कम अवस्थामा ती देशहरूमा उत्पन्न हुने रिपोर्ट भएको छ जहाँ यो तेल खाना पकाउन प्रयोग गरिन्छ। यो पहिले नै साबित भएको छ कि नरिवलको तेलले रोग रोक्न सक्छ र यहाँ सम्म कि उपचारको असर पनि हुन सक्छ। यो प्रभाव ketones मा निर्भर गर्दछ, जुन मस्तिष्क मा नारियल तेल द्वारा प्रदान को लागि ग्लूकोज ऊर्जा मा परिवर्तित गर्न सकिन्छ।
नरिवल तेलको नियमित सेवनले पनि क्यान्सरको बिरुद्ध सुरक्षा पनि प्रदान गर्न सक्छ। तेलले शरीरमा एंटीओक्सिडेंट एंजाइमहरूको संख्या बढाउँछ। यो एंजाइमहरु क्यान्सर कोशिकाहरु को विकास को रोकथाम गर्छन।
पार्किन्ससनको रोगमा नरिवल तेलको अद्भुत प्रभाव पनि छ। उस्तै एंजाइमहरू जसले कैंसरको विकासलाई रोक्न पनि मानव तंत्रिका कोशिकाहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। पार्किन्सन र अन्य डेरिनेरेटिभ तंत्रिका रोगहरू यसैले तेलले घटाउन सकिन्छ वा विकासबाट जोगिन सक्छ।
कुन फारममा उत्पादन गर्न सकिन्छ?
नरिवल तेल ठोस हुन्छ जब चिसो र तरल पदार्थ मात्र गर्मीको साथ थपियो। अधिक बिक्रेताहरूको लागि यो उत्पादन चश्मेमा उपलब्ध छ। मूलतः, एक परिष्कृत र मूल निकोल तेलको बीचमा भिन्नता छ। परिष्कृत संस्करण मा नारियल को मासु पहिले सुकेको छ। त्यसपछि तेल सुकेको मासुको बाहिर निस्कन्छ। त्यसपछि, उत्पादन एक रासायनिक उपचार द्वारा परिष्कृत गरिन्छ ताकि odors र स्वाद हटाउन सकिन्छ। यस प्रकार, यस प्रक्रियाको लागि प्रयोग गरिएको कोक मासुको पूर्ण रूपमा शुद्ध हुनु हुँदैन। यस प्रक्रियाको बावजूद, लौरिक एसिड सामान्यतया राम्रो संरक्षित छ। तथापि, हाइड्रोजनसँग परिष्कृत तेलको उपचार गर्दा सावधानी लिइन्छ। यस्तो अवस्थामा, ट्रांस वसा बनाउन सक्छ जसले कोलेस्ट्रॉल स्तर बढाउन सक्छ। परिष्कृत नारियल तेल सामान्यतया नाम "RBD" अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ।
यसको विपरीत, त्यहाँ देशी तेलहरू छन्, जसलाई "VCO" भनिन्छ। यी तेलहरू सुविध मेकेनिकल प्रक्रियाहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ र deacidified वा deodorized हुनु हुँदैन। यस प्रकारको अधिकांश उत्पादनहरू तथाकथित सूखी विधिद्वारा उत्पादित गरिन्छ। नारियल मासु पहिला सूर्यमा वा ठूलो औद्योगिक ओवनमा सुकेको छ। त्यसपछि, तेल बिना चिसो ठुलो छ। यस विधिले उत्पादन गरिएको तेलले सानो नमी समावेश गर्दछ र यसैले वर्षहरू आउन टिकाऊ छ।
तथापि, गीला विधि मा ताजा नारियल मासु प्रयोग गरिन्छ। नरिवल दूध गर्मी को बिना मासु देखि दबाईएको छ। पछि नरिवल दूधबाट तेल अलग गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। सबैभन्दा राम्रो र दयालु प्रकारको केन्द्रापसारक विधि।
शुद्ध, नरिवल तेल 1000ML (1L) कपाल, स्किन र कुकिंगका लागि - नारियल तेल जैविक, नेटिभ र चिसो प्रेसडिप्ले
श्रीलंकाबाट नियन्त्रणत्मक कार्बनिक खेतीबाट
फ्राइकिङ, पकाउने र बेकिंगको लागि उपयुक्त
कपाल र छालाका लागि हेरचाह उत्पादन
जनावरहरूको लागि पनि हेरचाह उत्पादन
प्राकृतिक, मूल, ठंड दबाया, कच्चा खाना, जैविक, vegan
तपाईं उच्च गुणस्तरको उत्पादनलाई कसरी चिन्नुहुन्छ?
नारियल तेल मूलतः उच्च गुणस्तरको प्राकृतिक उत्पादन हो। यद्यपि, त्यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण गुणस्तरहरू छन् जुन मुख्य तरिकाले निर्माण विधिसँग सम्बन्धित छन्। यदि तेलको पहेंलो रङ्ग छ, यो मानिन्छ कि यो गर्मीको प्रभाव अन्तर्गत उत्पादन गरिएको छ, जसको परिणामस्वरूप धेरै सक्रिय सामग्री हराएको छ। खरिद गर्दा, पहिला कार्बनिक लेबलमा ध्यान दिनुपर्छ, जसले पुष्टि गर्दछ कि कोकोस बिरुवाहरु द्वारा पारिस्थितिक दिशानिर्देश अनुसार काममा मात्र निको प्रयोग गरिएको थियो। विशेष मूल्य को प्रायः प्रायः सानो हेलिकप्टरको उत्पादन गरिएको तेल हो। यसको अतिरिक्त, एक देशी तेल को चयन गर्नु पर्छ, जो गीले विधि र केन्द्रापसारक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित गरिएको थियो। यसबाहेक, यो वांछनीय छ कि तेल मात्र एक सानो अवशिष्ट नमी समावेश गर्दछ जुन तेल लामो हुन्छ।
उच्च गुणस्तरका निर्माताहरूको प्रस्ताव
Mituso बाट उच्च गुणस्तरको उत्पाद उपलब्ध छ। तपाईंले नाम अन्तर्गत इन्टरनेटमा देख्नुहुने उत्पादन
mituso जैविक नरिवल तेल, देशी, 1er पैक (1 एक्स 1000 मिलीलीटर) ह्यान्डल ग्लास डिस्प्लेमा
मिटुसो अर्गानिक नरिवल तेलमा मूल रूपमा 53% लौरिक एसिड र क्याप्रिलिक एसिड 8% सम्म, क्यापरिक एसिड 6,5% सम्म हुन्छ।
पहिलो कोल्ड प्रेसिंगबाट पहिलो श्रेणीको जैविक गुणस्तर र श्रीलंकामा साना फार्महरूमा जैविक खेती नियन्त्रण गरिएको।
कच्चा खाना, शाकाहारी, ग्लूटेन-रहित र ल्याक्टोज-रहित, ट्रान्स-फ्याट्टी एसिड-मुक्त, अपरिभाषित, डिओडरिज, कठोर वा ब्लीच।
हाम्रो नरिवल तेल बहुमुखी छ, फ्राई र बेकिंग को लागी, wok र हलचल-फ्राइ, स्प्रेड र सॉस को लागी।
छाला र कपालका लागि प्रसाधन सामग्रीमा पनि प्रयोग गरियो।
श्रीलंकाका साना खेतहरूमा कार्बनिक नारियलबाट उत्पादन गरिएको छ। तेल कोमल ठंडे दबाएर उत्पादन गरिन्छ, त्यसैले सबै महत्त्वपूर्ण सामग्री संरक्षित छन्। उत्पादन 100 प्रतिशत मूल हो नरिवल तेलत्यो कुनै पनि रासायनिक additives बाट मुक्त छ।
अर्को उत्कृष्ट उत्पादन नम्बर अन्तर्गत छ
ह्यान्ड ग्लास 1000ml सूचकमा ओलमोउले S Organing कार्बनिक नारियल तेल नाईभ
1 बाट उच्चतम प्रिमियम गुण। चिसो प्रेस - वर्जिन नारियल तेल
प्रमाणित कार्बनिक खेती / ईसी कार्बनिक गुणबाट मूल निकोल तेलको 100 प्रतिशत
परिमार्जित, कठोर छैन, ब्लीड गरिएको छैन, विकृत छैन - ताजा लुगाबाट थिच्नुहोस्
जर्मनीमा मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ प्रयोगशालाहरु द्वारा नियन्त्रण गरिएको अवशिष्ट
भिजन र ल्याक्टोज मुक्त, लौरिक एसिडमा अमीर
तेल मिल Solling द्वारा प्रस्तावित। यो उत्पादन पनि श्रीलंकाबाट कार्बनिक नारियल द्वारा उत्पादित गरिएको छ। उत्पादन कार्बनिक मुहर बन्छ र देशी हो। जर्मनीको स्वतन्त्र प्रयोगशालाहरु द्वारा नियमित चेक द्वारा उत्पाद को शुद्धता ग्यारेन्टी गरिन्छ।
सर्वश्रेष्ठ उत्पादन र भिडियोमा उनीहरूको अनुप्रयोग
को कार्यको बहुमुखी मोड नरिवल तेल यहां सम्म कि गम्भीर बीमारियों संग, ज्यादातर लोग हमेशा चकित हो। त्यसैले यो विषयमा विशेषज्ञहरूको विचार सुन्न धेरै रोचक छ। उदाहरणको लागि, यूट्यूबसँग एक भिडियो छ जसले तपाईंलाई कसरी सिकाउँछ कि कसरी मस्तिष्क र अन्य शारीरिक कार्यहरूमा तेलको प्रभावहरू अझ राम्ररी बुझ्न सक्छ।
अल्जाइमरको रूपमा डमिनियसको उपचारको लागि तेल प्रयोग गर्न नयाँ प्रवृत्तिलाई समझाईएको छ र तहमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
यद्यपि परिणाम नरिवल तेलको गुण र वैज्ञानिक रोगहरूमाथि उनीहरूको प्रभावमा वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त अचम्मलाग्दो छ, धेरै मानिसहरु तेलको कस्मेटिक प्रभावमा रूचि राख्छन्। यूट्यूब भिडियोमा तपाईंले उत्पादन कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने द्रुत अवलोकन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
निस्सन्देह, यो एक गुणस्तर उत्पादन खरीद गर्न आन्तरिक र बाह्य अनुप्रयोगमा महत्त्वपूर्ण छ।
नतिजाहरु अब सम्म विषय मा अध्ययन संग Kokosöl को वैज्ञानिकहरूले प्रोत्साहन गर्नका लागि थप सम्भावित प्रयोगहरूको अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। 2016 मा, उदाहरणका लागि, कोलोरेक्टल क्यान्सरमा तेलको प्रभाव एक अध्ययनमा खोजी गरियो। यो क्यान्सर पुरुष र महिला दुवै मा एक भन्दा साधारण क्यान्सर मध्ये एक हो। यो अध्ययन एडिलेड विश्वविद्यालय ले अमेरिकन वैज्ञानिकहरु द्वारा र क्यान्सर रिसर्च जर्नल मा प्रकाशित गरियो। नारियल तेलमा राखिएको लौरिक एसिड दुई दिन भित्र बृहत् क्यान्सरको क्यान्सरको 90 प्रतिशत नष्ट गर्न सक्षम भयो। जीवित जीवहरुमा यी अध्ययनहरु को लागी संसाधन को कमी को बावजूद, खोज को क्यान्सर उपचार को कोमल तरीकों को खोज मा groundbreaking मानिन्छ। अध्ययन कोलोराडो राज्य मा नारियल रिसर्च सेन्टरमा जनावरहरूमा आयोजित अध्ययन द्वारा समर्थित छ। यो देखाइएको छ कि क्यान्सरको कक्षले यस तेलको अतिरिक्त प्राप्त गर्ने जनावरहरूमा बढ्न सक्दैन।
नरिवल तेलले पनि रासायनिक रोगलाई राहत दिन्छ। यो साबित भएको छ कि नरिवल को तेल को दैनिक सेवन अक्सर सामान्यतया गंभीर साइड इफेक्ट्स लाई रोक सकते हो जुन सामान्यतया यस्तो थेरेपी संग।
तेल मा निहित lauric एसिड, अब क्यान्सर अनुसन्धान मा ठूलो आशा मानिन्छ, त्यसैले धारणा तपाईं उत्पादन खाने द्वारा क्यान्सर को शुरू अघि केही हदसम्म आफूलाई जोगाउन सक्छ जायज छ।
इन्टरनेटमा लाभकारी खरीद
यदि तपाईं नरिवल तेल तपाईंको आहारमा, वा सुन्दरताको हेरविचारको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँसँग उत्पादन खरीद गर्न इन्टरनेटमा उत्कृष्ट अवसर छ। त्यहाँ एक धेरै ठूलो चयन प्रदान गरिएको छ, जस्तै जैव पसलमा। त्यसैले तपाईं आफ्नो अवकाशमा व्यक्तिगत उत्पादन विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ र एक उच्च गुणस्तरको उत्पादन फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन महत्त्वपूर्ण सक्रिय सामग्रीहरू अपरिवर्तित छन्। तपाईं उत्पादन तुलनाहरू र परीक्षणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र उत्पादनबाट उत्पत्ति कुन देशको बाटबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जैव-मुहरहरू र स्वतन्त्र नियन्त्रणहरू प्रत्येक उत्पादनको लागि उपलब्ध छन् र तपाइँलाई प्रीमियम ग्रेड तेल फेला पार्न मद्दत जारी राख्छन्। इन्टरनेटमा खरिद गर्ने अर्को फायदा यो हो कि अधिकांश अवस्थामा तपाई जैव स्टोर वा स्वास्थ्य खाद्य भण्डारको तुलनामा खरीदमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अतिरिक्त, यो कम्प्युटर मा आफ्नो आफ्नै तालिका मा जाँच गर्न र यो एक मात्र आदेश दिन को लागि सुखद हो। त्यसैले तपाईं न केवल पैसा बचाउनुहुन्छ तर पनि समय।
चिसो दबाएर, जैविक संरचना नरिवल तेल असाधारण छ र यस उत्पादनलाई प्रकृतिको उपहार प्रदान गर्दछ जुन यसले विभिन्न तरिकामा शरीरलाई सकारात्मक असर पार्न सक्छ। तेल शरीर लागि ऊर्जा एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो जो संतृप्त फैटी एसिड, को प्रतिशत 92 छ। 62 प्रतिशत यी मध्य-चारा फैटी एसिडहरू छन्, जसमा लौरिक एसिडले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए राखन को लागि यो महत्वपूर्ण महत्व हो। एउटै एकाग्रतामा, लौरिक एसिड केवल स्तन दूध मा पाइन्छ। अध्ययन गर्ने lauric एसिड र caprylic एसिड पनि नरिवल तेल मा निहित छ, जो यस्तो strep घाँटी, मूत्राशय संक्रमण, बाथ सुनिंनु, निमोनिया, मेनिनजाइटिस, लैंगिक संक्रमण, पेट अल्सर र रूपमा रोगहरूबाट कारण छ कि ब्याकटेरिया, भाइरस र अन्य जीवाणुहरू मार्न सक्षम छन् कि सिद्ध गरेका छन् धेरै अन्य रोगहरु को कारण। फेगुलल संक्रमणहरू वा हेपेस र खसराहरू जस्तै वायरल संक्रमणहरू तेलद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ।
तपाईं तेल विभिन्न आहारमा आफ्नो आहारमा थप्न सक्नुहुनेछ। यो बिना मुक्त रेडिकलहरू बनाएर 177 ° C सम्म गरम गर्न सकिन्छ। यसकारण, तपाईं खाना पकाउने र बेकिंगको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सुखद स्वाद संग, यो पनि सलादहरुको लागि उपयुक्त छ। तेल पनि सीधा लिन सकिन्छ, जुन विशेष गरी बीमारीको लागि सिफारिश गरिन्छ। यसको अतिरिक्त, ठण्ड-दबाईएको कुंवारी नारियल तेल पनि बाह्य घावको हेरविचार र छाला हेरविचारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यहाँ पेश गरिएको सामग्री मात्र तटस्थ जानकारी र सामान्य शिक्षाको लागि हो। उनीहरूले वर्णित वा उल्लेख निदान विधि, उपचार वा औषधीय उत्पादनका लागि सिफारिस वा एक अनुप्रयोगको गठन गर्दैनन्। पाठ न त दावी गर्न नसक्ने न त यो प्रस्तुत जानकारीको माथि-टू-हितायत, सहीता र सन्तुलन निश्चित हुन सक्छ। पाठ कुनै पनि तरिकाले डाक्टर वा फार्मासिस्टबाट व्यावसायिक सल्लाह बदल्न सक्दैन र कुनै पनि रोगको लागि नि: शुल्क निदान र प्रारम्भ, परिमार्जन वा उपचारको अन्त्यको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिदैन। सधैँ डाक्टरलाई तपाईलाई स्वास्थ्य समस्याहरू वा उजुरीमा विश्वास गर्नुहोस्। हामी र हाम्रा लेखकहरूले कुनै पनि असुविधा वा क्षतिको लागी कुनै जिम्मेवारी मान्दैन जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको जानकारीको प्रयोग बाट।
अघिल्लो लेखआईफोन एक्स
अर्को लेखसांगो समुद्री कोरल